Translations < Myanmar (Burmese) < 4.9.x < GlotPress — WordPress.org
Translation of 4.9.x: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (2,667) • Translated (1,441) • Untranslated (1,224) • Waiting (37) • Fuzzy (0) • Warnings (4)
The site you were looking for, %s, does not exist, but you can create it now! သင်ရှာနေသော site <strong>%s</strong> မရှိပါ။ အသစ်ပြုလုပ်လိုလျှင် ယခုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။	 Details
သင်ရှာနေသော site <strong>%s</strong> မရှိပါ။ အသစ်ပြုလုပ်လိုလျှင် ယခုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
2018-11-01 23:33:43 GMT
%1$s is your new site. <a href="%2$s">Log in</a> as &#8220;%3$s&#8221; using your existing password. %1$s က သင့်ရဲ့ site အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိ စကား၀ှက် ကို သုံးပြီး <a href="%2$s">၀င်ရောက်ပါ</a>။	 Details
%1$s က သင့်ရဲ့ site အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လက်ရှိ စကား၀ှက် ကို သုံးပြီး <a href="%2$s">၀င်ရောက်ပါ</a>။
2018-11-02 00:00:00 GMT
html_lang_attribute my	 Details
2017-04-20 21:02:31 GMT
G Short for green in RGB စိမ်း	 Details
2017-05-18 10:32:41 GMT